यी यु’वतिको हेर्नै न’सकिने का’मुक भिडियो सार्वजनिक !! ( भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > रोचक > यी यु’वतिको हेर्नै न’सकिने का’मुक भिडियो सार्वजनिक !! ( भिडियो हेर्नुहोस)
admin December 20, 2020 रोचक	0
पछिल्लो समय पो’र्न हेर्नेहरुको संख्या बृद्दि हुँदै गइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ | तर अ’श्लिल चलचित्र हे’र्नु हा’निका’रक हुन्छ, यसले जीवनमा ठुलो स’मस्या नि’म्त्याउन पनि सक्छ । त्यो तपाईंको लागि घा’तक हुन सक्छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार जसले पो’र्न फि’ल्मबढी मात्रामा हेर्छन् उनीहरुको जीवनमा रो’मान्स कम हुँदै जान्छ । उनीहरुलाई डे’ट, कसैसँगको भे’टघाट र रमाइलोले खासै अ’सर पर्दैन । किन भने उनीहरुले यी सवैमा भन्दा पो’र्न हेर्न मै आ’नन्दको महशुस गर्छन् । ***भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला***
ऐन महरले सामाजिक सञ्जालमै लेखेः ओलीले संसद विघटन गरेर ठीक गरे, कारण यस्तो!
के तपाईले राति सपनामा मरिसकेको मान्छ देख्नुभयोो? किन देखिन्छन् सपनामा मरेका मानिस ? जान्नुहोस्!